Iwo akanakisa manomano ekushandisa WhatsApp senge pro | IPhone nhau
WhatsApp yagara yave yakakosha kune yedu smartphone. Zvakanyanya zvekuti zvinova zvisinganzwisisike gore rega rega Apple inoshingirira kuvhura iyo iPhone ine simba kupfuura yapfuura kana isu tikanamatira kune manhamba ekushandisa tinoona kuti yakawanda yenguva yatiri kushandisa iyo iPhone iri kunyatso kutaura kuburikidza neyedu meseji app… Chii kutambisa, handiti? Sezvo isu tichiziva kuti iwe unoda WhatsApp chii Tinokuunzira nhasi vhidhiyo uye dzidziso ine akanakisa manomano ekushandisa WhatsApp sehunyanzvi.
1 Nyora netapureta typeface
2 Chinja fomati: Bold, italic uye strikethrough
3 Delete WhatsApp meseji
4 Injini yekutsvaga yeGIFs
5 Sevha data uye bhatiri ne otomatiki kurodha pasi
6 Bata ma Stickers, uchiba kubva kune vamwe
7 Isa password kuWhatsApp
8 Tsvaga mavhidhiyo, mapikicha uye mafaera zviri nyore
9 Zviratidzo mukati mekushandisa
Nyora netapureta typeface
Este ndeimwe yeazvino "manomano" akawedzerwa neWhatsApp kune ayo mashandisirwo uye nekudaro eashoma kushandiswa. Muchiitiko chekuti iwe wanga watobhowekana neiyo typography iyo yako iPhone yakaratidza zvine chekuita nekukurumidza mameseji kunyorera, nguva yasvika yekuchinja iyo tsamba.
Nokuda kweizvi isu tinongofanirwa kusarudza iwo mavara usati wautumira, tinya pane chinyorwa fomati fomati uye sarudza Monospaced, kana, uchikundikana izvo, shandisa matatu makotesheni pamberi uye shure kwechinyorwa kuitira kuti zvigadziriswe kana zvatumirwa.
Chinja fomati: Bold, italic uye strikethrough
Iyi ndeimwe yemhando dzekare uye imwe yeayo atakanyanya kutaura pano mu iPhone News, asi haigone kushayikwa mune izvi gwara rekushandisa WhatsApp sehunyanzvi. Iko hakuna imwe nzira iri nani yekupa kusimbisa kana kunzwa kune chinyorwa pane nekuchigovera akasiyana mafomati.
Kuti tiite izvi tinongotevera matanho apfuura, asi ikozvino zvatichaita kusarudza Italic, Strikethrough kana Bold, zvichienderana nezvinodiwa. TTinogona zvakare kuwedzera anodiwa mameseji kune iwo mavara zvakananga, izvo zvinowedzerwa otomatiki kana uchidzvanya pane iyo sarudzo.
Delete WhatsApp meseji
Iyi ndiyo imwe yemabasa ayo ari echinyakare uye ane nharo panguva imwe chete. Pakupedzisira unogona kudzima WhatsApp meseji, Dambudziko nderekuti ivo vachasiya trace, chiratidzo che "Iyi meseji yabviswa", kuzivisa rimwe bato.
Kana isu hatigone kuidzima patinoda, isu tine anenge maminetsi mashanu kusvika gumi ekuzvibvisa, kana zvisina kudaro, isu tichangoona sarudzo kune «Nditsvagire ini», iri nguvai iyo "Delete kune vese" izvo zvinotibvumira kudzima zvese zviri zviviri chishandiso chedu uye icho chevamwe vashandisi.
Injini yekutsvaga yeGIFs
MaGIF ave chikamu chehupenyu hwedu hwezuva nezuva, pane zvinoshandiswa zvakaita se Instagram kana Teregiramu izvo zvatova nazvo zvakanyatsobatanidzwa, WhatsApp haigone kuve shoma, kunyangwe mune ino kesi zvakati omei kuwana iyo Tenor yekutsvaga injini, mupi weGIFs muWhatsApp.
Tinodzvanya pane iyo GIF / Sticker bhatani pane iyo keyboard, isu tinosarudza GIF uye muzasi kurudyi tine girazi rinokudza, Kana isu tikabaya pagirazi rinokudza, zvinotitora kuenda kuTenor yekutsvaga injini iyo inotiratidza maGIF akasiyana zvichienderana nemazwi akapinda mubhokisi remavara.
Sevha data uye bhatiri ne otomatiki kurodha pasi
Otomatiki kurodha pasi ipadivi-pfumo, ivo vanotiponesa basa asi kutambisa bhatiri redu uye yedu data rate. Nokusingaperi isu tine otomatiki faira kurodha pasi rakagoneswa, uye izvi zvinova dambudziko kunyanya nemidziyo yepasi yekuchengetedza
Nekuti izvo Zvinokurudzirwa kuti tiende kune izvo WhatsApp zvigadziriso, uye muchikamu che Dhata uye kuchengetedza, ngatitorei mukana wekumisikidza otomatiki kurodha pasi mafaira maererano nezvatinoda uye kugona kweye smartphone yedu. Tinogona zvakare kudzikisa kushandiswa kwedata mumavhidhiyo mafoni.
Bata ma Stickers, uchiba kubva kune vamwe
Mangani manamatira atove nawo, mazhinji acho achireva zvinosetsa zvemukati, uye isu tiri horny, hatigone kubatsira. Nekudaro, dzimwe nguva zvinonetsa kuti uwane paketi imwechete yezvinamirwa muApple App izvo zvinosangana nezvatinoda, tisingataure "zvakavharika" zvemukati.
Kuti tiite izvi tinogona kutora mukana uye "kubata" zvinonamirwa kushamwari dzedu, nekuti izvi zvakapusa isu tinofanirwa kubaya pane chinamira chavakatitumira uye kusarudza sarudzo ye Isa kunezvaunofarira, ikozvino tichava nayo parutivi muChikamu chedu cheVadikanwi pasina kuwedzera kunonoka.
Isa password kuWhatsApp
Iyo WhatsApp yemumwe neumwe inogona kuve neruzivo rwakadzama, saka WhatsApp nguva pfupi yadarika yakafunga kuwedzera mukana wekuunza ongororo nyowani usati wavhura application mameseji, nekuda kweizvi isu tinogona kuzikanwa kuburikidza nenzira yatakashandisa pa iPhone: Chiso ID, Bata ID, kana password.
Kuti tiite izvi kushanda isu tinongofanirwa kufamba kuburikidza nezvirongwa kuAccount> Yakavanzika chikamu uye isu tichawana marongero akasiyana e Screen yekuvhara, rinova ndiro basa ratange tichitsvaga uye rinotibvumidza kuvharira WhatsApp kubva pamaoko nemeso evamwe.
Tsvaga mavhidhiyo, mapikicha uye mafaera zviri nyore
Kunyangwe vakawanda vasingazvizive, WhatsaApp ine injini yekutsvaga ine simba yakanyatsobatanidzwa muhurongwa, isu tinongofanirwa kubaya pamusoro peye meseji chat, kwainoisa zita racho weboka reWhatsApp kana wekutaurirana ari mubvunzo.
Kamwe mukati, yekutanga menyu ye Mafaira, zvinongedzo uye maHTML. ndizvo chaizvo zvatiri kutsvaga. Kamwe mukati tichakwanisa kutsvaga nemazuva ese zvemukati izvo zvatakagamuchira uye izvo zvakachengetwa zvine chekuita neiyo chat, ikozvino zviri nyore kuwana iyo faira uye kunyangwe chinongedzo chavakatitumira mwedzi yapfuura.
Zviratidzo mukati mekushandisa
Kudzora kwechiratidzo cheWhatsApp Izvo zvakada kufanana neiyo yatinayo muIOS Mail application uye vazhinji havatore mukana nazvo. Huya, isa odha pane yako WhatsApp chat desk uye ichaita kuti hupenyu hwako huve nyore.
Kubva kuruboshwe kurudyi: Maka seyakaverengwa / isina kuverengwa + Pini kutanga
Kubva kurudyi kuenda kuruboshwe: Archive chat + Dzimwe sarudzo
Ndiko kusarudzika kwauchazokwanisa kuronga yako tafura yedhesiki sekunge iwe wanga uri Marie Kondo iye, saka wave kutotora mabhatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Iwo akanakisa manomano ekushandisa WhatsApp senge pro
Chekutanga mifananidzo yeiyo nyowani multitasking modhi yeIOS 14
iOS 13.4 ichatibvumidza isu kusarudza mhando yezvirodha pasi uye kutenderera kweiyo app yeTV